waqti fasax ah
Waxay u ogolaataa shaqaalaha inay qaataan wakhti fasax ah si ay u daryeeshaan arrin caafimaad oo wakhti dheer ah naftooda, caruurtooda, ama qof ay jecel yihiin ama inay wax ka qabtaan baahiyaha inta lagu jiro maqnaanshaha muddada dheer ee shaqada, sida hawlgelinta milatariga.
Waxay kordhisaa daacadnimada
Wax saameyn ah kuma yeelan faa'iidada Waxay kordhisaa haynta, hoos u dhigista kharashyada wareejinta
Waxay bixisaa jawi shaqo oo ka caafimaad badan Shaqaaluhu waxay ka soo kabtaan naafo, jirro, ama dhaawac si dhakhso ah
Waxay dhiirigelisaa isticmaalka daryeelka caafimaadka ka hortagga ah
Shaqaaluhu waxay si degdeg ah uga soo kabtaan naafo, jirro, ama dhaawac
daraasad xaaladeed: Mortenson
Siyaasadaha PTO ayaa ilaalinaya
cimri dheer oo tartan ah
Saddexdii sano ee la soo dhaafay 11kii sano ee ay la joogtay Mortenson, Krisha Ward waxa ay diiradda saaratay sidii ay xubnaha kooxda uga caawin lahayd wax kasta oo laga soo bilaabo xirmooyinka raritaannada iyo dalacsiinta isbeddelka mushaharka iyo caleemaha maqnaanshaha. Warshadaha tartanka ku jira, Ward waxay u aragtaa siyaasadda wakhtiga fasaxa ah ee shirkadu bixisa (PTO) inay tahay qalab shaqaaleysiineed oo muhiim ah.
"Waa wax qiimo leh in xubnaha kooxdayadu ay waqti qaataan oo ay helaan wakhti ay ku daryeelaan baahiyaha qoyskooda," ayuu yidhi Ward. "Waxaan cabbirnaa faa'iidooyinka aan bixinno warshadaha oo dhan, waxaanan u aragnaa jawaabta guud ee siyaasadeena PTO inay tahay mid wanaagsan. Waxay naga caawiyaan in aan sii hayno shaqaalaha, maadaama ay dadku halkan ka shaqeeyaan, faa'iidooyin badan ayay helayaan si ay ugu sii jiraan oo ay ugu koraan ururka."
Qoondaynta PTO ee dhammaan noocyada kala duwan ee shaqaalaha* (mushaharka aan farsamada ahayn/farshaxan shirkadeed iyo mid aan urur ahayn) waxay ku salaysan tahay sanadaha adeegga. Tusaale ahaan, shaqaalaha mushaharka aan farsamada ahayn waxay helayaan 19 maalmood sannad kasta saddexda sano ee ugu horreeya, halka kuwa Mortenson joogay 19-25 sano ay hubiyaan 34 maalmood sannad kasta. Shaqaalaha aan farsamada gacanta ku jirin waxay kaydin karaan ilaa 50% dakhligooda sannadlaha ah ee PTO ee bangiga sabtida, ka dibna waxay qaataan ilaa 40 maalmood markiiba. Wakhtiga sabtida waxa loo isticmaali karaa shantii sanaba hal mar ujeedo kasta (fasaxa, waalidka/Awoowga cusub, cusboonaysiinta guriga, iwm.). Mortenson waxa uu haystaa wakhti dheeraad ah oo fasax ah oo loogu talagalay xeerbeegtida ama murugada waxana uu bixiyaa 12 toddobaad oo fasax dhalmo ah hooyooyinka umusha, oo ay ku jiraan afar toddobaad oo fasax waalid ah oo loo isticmaali karo hooyooyinka, aabayaasha, lammaanaha iyo korsada/korinta waalidka.
Abaabulka fasaxa waalidiinta cusub waxay noqon kartaa mid dhib badan, sidaas darteed kooxda faa'iidooyinka Mortenson waxay ka caawiyaan shaqaalaha inay fahmaan ikhtiyaarkooda. "Aduungoodu wuxuu ku dhow yahay inuu weligiis beddelo," ayuu yiri Joeyln Osmanski, oo ah khabiir ku takhasusay HR. "Marka waxaan rabnaa inaan ku hagno habka loo marayo Cigna, maamulaha dheefaha. Waxaan rabnaa inaan yareyno welwel kasta oo ku saabsan waxa ay u baahan yihiin inay sameeyaan. Kadib, si dhow ayaan ula shaqaynaa marka ay shaqada ku noqdaan. Had iyo jeer waxay leeyihiin qof dhibco ah oo ay ku caawiyaan, taas oo asxaabteena ay qadarinayaan. "
*Macaashyada shaqaalaha ururka si gaar ah ayaa looga xaajoodaa.
Shaqaalaha: ~6,500 oo dhan 11 xafiis iyo goob
Eeg Tusaalaha Siyaasadda Wakhtiga Fasaxa ah ee Shaqaalaha Bixiya (PTO) ( thebalancecareers.com )
Ururka Caafimaadka Maraykanka. "AMA waxay aqoonsanaysaa Faa'iidooyinka Caafimaadka Dadweynaha ee Fasaxa jirada ee Lacageed." Juun 15, 2016.
Xarunta Falanqaynta Siyaasadda Adduunka. "Dib-u-eegis lagu sameeyey caddaynta dhererka fasaxa qoyska iyo lacagta la bixiyey." Febraayo 2018.
Waaxda Shaqada ee Mareykanka, Xafiiska Tirakoobka Shaqaalaha. "Faa'iidooyinka Shaqaalaha ee Sahanka Magdhawga Qaranka ee Maraykanka: Faa'iidooyinka Shaqaalaha ee Maraykanka." Maarso 2017.
Waaxda Shaqada ee Mareykanka, Xafiiska Tirakoobka Shaqaalaha. "Gelitaanka fasaxa milatari ee mushaharka leh ee 2018." November 30, 2018.